Home Wararka Burundi oo markale u sheegtay Farmaajo in ayan ka baxaynin Soomaaliya! Maxaa...
Burundi oo markale u sheegtay Farmaajo in ayan ka baxaynin Soomaaliya! Maxaa ka soo baxay shirkii maanta?
Sidii ay saakay MOL idinkuugu soo tabisay Madaxda dalka Burundi ayaa ku gacanseyrtay codsigii uga yimid madaxweyne Farmaajo. Ururka Midowga Afrika ayaa xoog ku saaray Madaxweyne Farmaajo in uu isaga tago dalka Burundi kuna soo qanciyo Madaxweyne Mudane Pierre Nkurunzizain in uu ciidankiisa kala baxo dalka Soomaaliya. Wadamada deeqa bixiyo ayaa u sheegay Farmaajo in lacagtii la siin lahaa ciidanka Soomaaliya ay ka imaan karto oo kaliya iyada oo ciidanka Burundi 1,000 ciidan ee ugu horeeyay ay dalka ka baxaan dhmaadka bishaan.
Hadaba war ah heshay MOL ayaa sheegow in shir ay albaabada u xiran yihiin oo ay yeesheen labada madaxweyne ayaa mar kale loogu sheegay MW Farmaajo in Dowlada Burundi ayan ciidankeeda kala baxaynin Soomaaliya oo ay joogi doonaan dalka Soomaaliya. Dowlada Burundi ayaa ku baaqaday in shir deg-deg ah ay isugu yimaadaan ururka amniga ee Midowga Afrika si looga noqday amarkaas.
Dowlad Burundi ayaa ku qaadato lacag gaaraysa $18 Milyan doolar joogitaanka ay ciidankeeda Joogaan Soomaaliya. Dhanka kale Madaxweyne Pierre Nkurunzizain ayaan marnaba ogolaynin in ciidankaas dib loogu soo celiyo Burundi ayaga oo keeni karo i ay cinqilaab ku sameeyana isaga madaama uusan u haynin lacag ciidanka la siiyo sidaas darteed ayuu Soomaaliya u arkaa meel uu ku meeleeyo ciidankiisa.
Farmaajo ayaa berito ku soo noqonaya Soomaaliya isaga oo aan guul ka soo hooyin safarkii uu ku tagay dalka Brundi.Waxaa nasiib xumo ah in Madaxweynihii dalka Soomaaliya uu ka baryayo dal kale in ay ciidankooda ay kala baxaan Soomaaliya. Su’aashuse waxa ay tahay maxuu u sheegi doonaa Ururka Midowga Afrika ee uu balanta ka soo qaaday una sheegay in uu soo qancin doono MW Pierre Nkurunzizain?